Krasnoyarsk State University Medical - Baro Medicine ee Russia
Krasnoyarsk State University Medical
Medical Krasnoyarsk State University Details
City : Krasnoyarsk
gaabinta : KSMU
aasaasay : 1942
Ardayda (qiyaastii.) : 4500
Ha iloobin in aad wada hadlaan Krasnoyarsk State University Medical
Qorto Krasnoyarsk State University Medical
Krasnoyarsk University Medical State waa mid ka mid ah Jaamacadaha ugu wanaagsan ma ahan oo keliya in Siberia iyo bariga fog ee Asia, laakiin sidoo kale in Russia. qalin Our oo dhan ka shaqeeyaan in ka badan dunida oo ay ku jiraan Jacaylku. In ka badan 30 heshiisyada iskaashiga caalamiga ah ayaa saxiixay la jaamacadaha dalalka kale.
University Medical Krasnoyarsk State ahaa kii ugu horeeyay inay soo bandhigto iyo cadeynayaa habka maareynta tayo leh, iyo in 2007 waxaan helay shahaadada ee tartanka All-Ruush "System of Diyaarinta qalin Hey'adaha Waxbarashada of Education Professional Quality". In 2008 jaamacadda ku guuleystay tartanka "System of takhasuska Tababarka Hubinta Tayada". In 2009 KrasSMU ayaa lagu soo daray galay diiwaanka of "Hay'adaha 100 Tacliinta Sare Best of Russia". In 2010 heshiis iskaashi la saxiixatay la Federation Adduunka ee Waxbarashada Caafimaadka (WFME) iyo Association for Education Medical in Europe (AMEE). In 2011 University ayaa kaalinta sida mid ka mid ah jaamacadaha heer sare-ee Russia iyo waxaa ka mid ahaa in Register Qaranka ee hay'adaha waxbarasho ee keenta Russia. In isla sanadkaas waxaan ku guuleysanay tartanka All-Ruush "nololeed Healthy Higher Education Hay'adda". In 2012 iyo in 2014 our jaamacad noqday guusha tartanka All-Ruush "The Barnaamijyada Waxbarashada Best of Cusub Russia".
Dhowr saynisyahano noo la siiyay la Ruush Federation Dowladda Prize iyo Prize Madaxweynaha Ruushka for saynisyahano dhalinyaro ah oo duurka ku ah sayniska iyo tiknoolajiyada.
Krasnoyarsk University Medical State hawlantahay si loo xaqiijiyo in arday kasta ee gala Krasnoyarsk State University Medical magacaabay ka dib markii Prof. V.F Voino-Yasenetsky heli doonaa waxbarashada ugu wanaagsan ee.
Kuliyada Caafimaadka Waxbarashada aasaasiga ah
Kuliyada of Pediatrics
Institute of ilkaha
Department of Psychology Clinical
Department of Cybernetics Medical iyo Control ee Daryeelka Caafimaadka
Kuliyada pre-jaamacadeed iyo tababar xirfadeed oo joogto ah
tababarka Branch dhinaca shaqada bulshada
Krasnoyarsk Institute Medical State waxaa la dhisay November 21, 1942 Go'aanka Guddiga All-Midowga on Tacliinta Sare ee Golaha Commissars Dadka iyo Shacabka Commissariat Caafimaadka ee USSR ah by midowga daad gureeyay in ay Krasnoyarsk Voronezh Institute Ilkaha, qayb ka mid ah Leningrad ee Medical 1-dii iyo 2-First Leningrad Institute Medical, iyo sidoo kale Leningrad carruurta Institute iyo Institute Leningrad ee Ilkaha. 
In arrinta ugu horeysay ee ardayda KSMI ahaa kow iyo konton dhakhtarka.
Ka hor 1958, Machadka ahaa barnaamijka tababarka kaliya – General Medicine, in 1958, awood carruurta oo la furay.
In 1978, School ilkaha ayaa la furay.
In 1992-2013 sano, ku qalin of sare macalimiinta waxbarashada xanaanada.
In 2006, Kuliyadda Farmashiyaha waxaa la furay.
In 2010, Waaxda dhaqtarka dhimirka la furay
In 2011, cybernetics caafimaad awood la furay.
Ma rabtaa wada hadlaan Krasnoyarsk State University Medical ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
University Krasnoyarsk State Medical on Map
Photos: Krasnoyarsk State University Medical rasmiga ah Facebook
dib u eegista University Medical Krasnoyarsk State
Ku biir si ay ugala hadlaan of Krasnoyarsk State University Medical.
University Siberian Federaalka Krasnoyarsk
Moscow State University Law Moscow